u-Faf ujabulela umbono we-ICC World Test Championship
Standard Bank Proteas captain Faf du Plessis
Ukapteni wama-Standard Bank Proteas, u-Faf du Plessis ujabulela umbono wokuqhudelana kwi-ICC World Test Championship yokuqala ezoqala ngo-August 1, 2019.
Uhlobo olusha luzoletha inselelo ku-Du Plessis namadoda akhe, futhi kuzoba yinto ukapteni ayilindele njengoba ama-Proteas azoqala umsebenzi wokufisa ukuba ompetha be-ICC World Test bezobe bedlala ngaphandle kwasekhaya neqembu eliphezulu ku-No. 1 i-India njengoba bezobe bevikela i-Freedom Trophy.
“i-ICC Test Championship yintsha futhi iyajabulisa kuloluhlobo,” kuphawula u-Du Plessis.
“Isikhathi eside besifisa ukuba nento esizoyidlalela ezosinika umbono olungile kwikhilikithi yama-Test. Ama-Proteas abe nomqhudelwano kwi-bilateral series eminyakeni embalwa edlule, futhi kuyela phambili, izinga seliphezulu kakhulu ngoba wonke ama-series abalulekile eminyakeni embili futhi ezamanqamu zizoba e-Lord’s.”
“Kushayisa ngomoya; njengabadlali silibhekile lelikhasi elisha kwikhilikithi yama-Test,” kusho ukapteni wama-Proteas. “Sinomsebenzi onzima ukuqala ne-India sidlala ngaphandle kwi-Freedom Series. Sabahlula ekhaya nge-season edlule kodwa ukudlala ne-India e-India cishe inselelo enzima kumdlali wama-international. Siphinde sibe nompetha bomhlaba i-England ekhaya, hlezi kuyi-series emnandi ehlobo kithina futhi esiyibhekile. Mhlawumbe sizoqala kanzima, kodwa wonke umuntu uzodlala nawonke umuntu, ngakho akunendaba.”
i-World Test Championship izobe i-World Cup yekhilikithi yama-Test, njengama-ODI nama-T20 World Cup, futhi kuzodlala amaqembu ayisishagalolunye adlala ama-Test emhlabeni. Eminyakeni embili abahamba phambili emhlabeni bazodlala kwi-Championship ukufinyelela phezulu. Amazwe amabili azobadlula bonke futhi ngo-June 2021, umphetha wangempela wekhilikithi yama-Test uzomenyezelwa.
Wonke amaqembu azodlala namaqembu ayisithupha kulawa ayisishagalombili eminyakeni embili ezayo. Konke ukunqoba, konke ukuhlulwa futhi konke ukulingana kuzobalwa ekumeni kwe-league. u-Du Plessis, onerekhodi elincomekayo njengokapteni wama-Proteas uyalijabulela uhlobo olusha ngoba luzohamba indlela ende ekugcineni usiko lekhilikithi yama-Test futhi likhuthaze abadlali abancane.
“Ngizwa ukuthi ikhilikithi yama-Test esesimweni esilungile. Abadlali abadlala zontathu izinhlobo zekhilikithi bazosho ukuthi ikhilikithi yama-Test uhlobo loqobo lomdlalo futhi uhlobo oluhamba phambili. Abadlali abancane bangathanda ukushesha kwekhilikithi yama-T20 kodwa uma umdlalo wama-Test uyela kwihora lokugcina osukwini lesihlanu, kunzima ukuhlula lobo bumnandi.”
i-series yasekhaya kuma-Proteas izobabona bebhekana ne-England ekhaya ngo-December no-January bedlalela i-Basil D’Oliveira Trophy njengengxenye ye-Test Championship. Abalandeli bekhilikithi bangababona ngamehlo e-South Africa kusukela ngo-26 December kuyela ku-16 February 2020 umdlalo wokuqala we-Test uzodlalwa ngo-26-30 December e-SuperSport Park kulandele i-New Year’s Day Test ngo-03 – 07 January e-PPC Newlands. Umdlalo we-Test wesithathu uzoba e-St George’s phakathi kwa-16 – 20 January futhi eyokugcina izoba kwi-highveld e-Bidvest Wanderers ngo-24 – 28 January.
Amathikithi azotholakala kusukela ngo-7 October, ukuthenga kuqala kwabe-Official Proteas Supporters Club kuzoba ku-www.opsc.co.za noma bavakashele u-www.cricket.co.za ukuthola imininigwane. #ProteaFire #SAvENG #ICCTestChampionship #UltimateTest #BasilDOliveiraTrophy
Imvula imosha umdlalo we-World Cup wama-Proteas nama-Windies Awakanqobi ama-Proteas emuva kokuhlulwa i-Bangladesh u-Steyn uzophuthelwa umdlalo wokuqala we-ICC Men’s Cricket World Cup i-CSA imemezela uhlelo lemidlalo yama-internationals ekhaya ngo-2019/20 Ukhishiwe u-Nortje kwi-ICC Men’s Cricket World Cup; kwabizwa u-Morris u-Rabada ubiziwe kwi-IPL ngenxa yokulimala umhlane u-Ngidi no-Nortje bazophuthelwa i-IPL Ama-Proteas adinge i-super over ukuze anqobe i-T20 international yokuqala u-Markram, u-Nortje no-Qeshile basha kwi-T20 series Ama-Proteas aqeda ukunqoba i-series ngo-5-0 kumdlalo omiswe ugesi u-Amla uzophuthelwa ukuphela kwe-ODI series ngesizathu sobubele